Dowlada Itoobiya oo xabsiga ka sii deynaysa maxaabiista u xirxiran siyaasada |
Dowlada Itoobiya oo xabsiga ka sii deynaysa maxaabiista u xirxiran siyaasada
Addis Ababa (estvlive) 04/01/2018
Ra’isul Wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa ku dhowaaqay in xabsiyada laga sii deyn doono dhammaan dadka u xirxiran sababaha siyaasadeed, islamarkaasna la xirayo xasbiga weyn ee Maekelawi.
Hailemariam Desalegn oo shir jaraa’id ka sheegay go’aankan ayuu sii raaciyay in dadka xukun sugayaasha ah iyagana la cafiyay. Itoobiya lama oga tirada rasmiga ah ee dadka siyaasadda u xirxiran, balse waxaa la ogyahay tiro badan la xirxiray sanadkii 2015-kii.
Maalmo ka hor ayay ahayd markii 19 qof oo lagu eedeeyay in ay ka tirsanyihiin ururka Ginbot 7 lagu xukumay dacwado la xiriira argagixisonimo.
Kulankii 18-maalmood u socday Ururuka EPRDF ayaa go’aankan, wuxuu imanayaa kadib wadatashiyo uu lahaa xisbiga talada haya ee EPRDF. Hay’ada Xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International ayaa soo dhoweysay warkan hase yeeshee waxa ay sheegtay hay’ada in xirida xabsiga Maekelawi shacabka dalka itoobiya ay aad ugu faraxsan yihiin xiritaanka xabsiga Maekelaw